Nweta usoro ihe ndozi na ArcGIS - Geofumadas
Febụwarị, 2010 ArcGIS-ESRI, cadastre, Apụta, GPS / Equipment, topografia
Me nnyocha nyocha nke cadastral na ọdụ zuru ezu, ma e wezụga ịnwe millimita ziri ezi, nwekwara ike ịba uru maka ebumnuche ndị ọzọ, ebe ọ bụ na anyị nwere ogo nke isi ọ bụla. Ka anyị lee n'okwu a, otu esi ewepụta usoro akara, nke anyị hụburu AutoDesk Civil 3Dna Bentley Geopak y manifold GIS, ya mere maka ebumnuche mmụta, na nke a anyị ga-eme ya na ArcGIS.
1. Ihe data CAD
Maka mmega ahụ, enwere m faịlụ nyocha na dgn, otu maka ụbọchị ọrụ ọ bụla. Ingbubata ya dị mfe dịka:
A na - ahọrọ faịlụ dgn na voila na ha niile. Hụ otu o si maa mma ha anya, ị pụrụ ịhụ ụbọchị ụmụ okoro ahụ rụrụ ọrụ, mgbe ha mere mgbali na mgbe ha tiri mkpu.
Karịa ihe na-adọrọ mmasị, ị nwere ike ịhụ ebe ha were isi, na nke a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ngbanwe nke mgbochi, iji were teepu tụọ ihu na ala. Bara uru iji kwado usoro nyocha ahụ maka oge enweghị nkwekọrịta na nha ederede ma ọ bụ nyocha ndị ọzọ. Also nwekwara ike ịhụ ebe ha kwụgoro akụrụngwa iji lee anya n'azụ.
2. Tinye isi na geodatabase
Maka njikwa ka mma, m ga-etinye ihe ndị a na geodatabase. Iji mee nke a, anyị chere na e kee ya na ArcCatalog ma kọwaa ya Njirimara klaasị.
Ngalaba mara na geodatabase
3. Mepụta ihe omuma
A pụrụ ileghara ọtụtụ n'ime usoro ndị a anya, ma maka ebumnuche nke nghọta nke iji 3D Analyst, anyị ga-ele ha anya na ntụziaka a.
Ngwa Nyocha 3D
Na nke a, anyị akọwapụtala aha ihe nlereanya ahụ, anyị ga-abanye ihe ndị a:
Tinye klas mara mma na ala
Ugbu a, anyị ga-emepụta TIN
Ị nwere ike ịhụ nke ahụ na njedebe na enweghi ihe zuru ezu ka triangulation na-ada ogbenye, ma ebe ebe dị n'okporo ámá, ọ dịgidere.
Achọpụtara m na n'ihi ịdị ọcha ha, na mbuli ụmụ a mehiere site na ịghara idebe mbuli ahụ na mgbanwe nke ngwa ahụ. Nhiehie echekwara, site na ịkọwapụta ihe ndị dị nso, mana nchọpụta nwere ike ịnwe oge iji mee mgbazi. Na-atụ aro na n'ime isi ihe abụọ dị na mbụ ha na-eji nhazi nhazi nke GPS nyere yana ohere zuru oke iji belata njehie ntụgharị n'ihi ezighi ezi nke GPS.
4. Nwepụta uzo
Mgbe niile n'ime 3D Analyst
N'ebe a, anyị na-ahọrọ TIN ọhụrụ e kere eke, ihe nkedo na etiti dị n'etiti contours (n'etiti ndị ọzọ pirouettes nke zoputara m n'ihi ihe ohere).
Nzọụkwụ ndị a bụ ndị ọzọ ma e jiri ya tụnyere Manifold GIS, mana nhọrọ dị ike.
5. Mpempe map nke mgbago.
Ihe na-abịa bụ iji nke a, nke a pụrụ iji mee ihe maka ịmepụta sistemụ, n'ihi na nke a abụghị nanị nyochaa ala, mana nnyocha nyochaa nke ị nwere ike ịrụ ọrụ profaịlụ n'okporo ámá naanị otu nzọụkwụ .
Previous Post«Previous CAD: Zighachi, wepụta
Next Post Na-akwadebe maka usoro ArcGISNext »
14 Na-aza "Genemepụta usoro akara na ArcGIS"
Clapa kwuru, sị:
Achọpụtara m na ọ magburu onwe ya, ma enwere m ike igosi ụdị mbipute ị nwere ike ịmepụta.
Echere m na njikọ ndị a nwere ike ijere gị ozi:
Nke mbụ bụ ugwo, ma echere m na na nke a ụzọ kacha mma ị ga-esi mụta bụ itinye ego na ezi ụzọ.
Onofreal2 kwuru, sị:
Ihe ọmụma dị mma, naanị nkowa m nwetara n'oge na-adịbeghị anya 10 arcgis m ka nwere nsogbu na ọtụtụ ihe, ị nwere ike ịgwa m otu esi amalite site n'ịcha ọ bụla nlebara anya ha na-akwado.
Tupu ị rụọ ọrụ na 3.2 arcview ma nwee mmetụta dị iche. Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka
Franz Leonardo kwuru, sị:
Enwere m ekele nke ukwuu maka ozi ahụ, site na TIN ị nwere ike ime ọtụtụ ihe, ma ebe a, ị kọwapụtara nke ọma otu esi eme ndokwa.
February, 2011 na
Lelee ebe nchekwa dị n'ime, ma lee nhazi ahụ, ọ bụrụ na ọ na-ekwu okwu banyere ebe nchekwa dị n'ime.
Cheekwa oge oge ijide, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpụmkpụ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na a haziri ahazi nke na-eme ka ị mee oge na-esote.
Ing. Pablo kwuru, sị:
Jenụwarị, 2011 na
ekele m nke ukwuu nyere m aka, enwere m onye na-egwu igwe 6 v2.1 GPS ma ọ bụrụ na anaghị m aghọta ihe kpatara m ji enweta data na m chọrọ nchekwa zuru ezu maka nhazi ozi na ọ bụ ebe nchekwa dịpụrụ adịpụ na-efu.
Robert kwuru, sị:
Ụmụnna nwere ike ime onye nkuzi na nkọwa ndị ọzọ biko.
Polilineas sonyere ha na iwu Pedit, n'ọtụtụ nhọrọ sonyere. Ihe na-eme bụ na ha ga-abụrịrị polyline, ọ bụrụ na i nwere smartline curves ị gaghị enwe ike.
Valeria kwuru, sị:
Ndewo na enwere m nsogbu ịbịnye ọtụtụ ngọngọ, onye nwere ike inyere m aka, mee ka m dokwuo anya na m ga-esonyere polyline na polylines ndị ọzọ bụ nke a na-aghọta? ekele
cok2007 kwuru, sị:
Ezi nkọwa ọma !!!
Ọfọn, Achọrọ m ịma ma ị nwere ike inyere m aka. Achọrọ m ịma otu esi etinye faịlụ na ichighari na ArcGIS, ọ bụrụ na ị nwere ike iziga m paos na jalfremar_59@yahoo.es kwuru, sị:
August, 2010 na
Nke a dị mma ịmara na ọ dị mgbe ndị mmadụ nwere ihe ọmụma ma ghara ịla azụ ịkwado ndị ọzọ. Ọmarịcha ihe okike ndị a na ArcGis.
Ị nwere ike inyere m aka site n'igosi ihe ndị ị ga-eme iji mepee map nke mkpọda na osisi nke oké ọhịa jalfremar_59@yahoo.es na aha m bụ Jose Alfredo Martínez, Honduras.
john sanmartín kwuru, sị:
Enwere m ekele maka onyinye ntinye aka, ozi gị enyerela m ezigbo oge
RaptorX kwuru, sị:
March, 2010 na
albaro parra kwuru, sị:
February, 2010 na
nke a bụ nke ọma nkọwa a na m ga-enwe ekele maka ịkụziri m site na mmalite otú e si esi meepụta esemokwu